Rondedzero yenjodzi dzakashata, saga yakagadzirwa naDaniel Handler. | Zvazvino Zvinyorwa
Nhevedzano yenjodzi dzakashata, Kutanga kwakaipa.
Nhevedzano yenjodzi dzakashata akateedzana emabhuku akagadzirwa naDaniel Handler, uyo anosaina pasi pezita rekunyepedzera Lemony Snicket. Zita rekutanga muChirungu, Nhevedzano Yezviitiko Zvisingafadzi, zvakare inoshandura se Nhevedzano yezviitiko zvinosiririsa. Yakave yakagadzirirwa mukati engano dzevana nevechidiki dzakanakisa, kunyangwe paine rima uye risinganzwisisike mamiriro ekutaura kwayo.
Yakagamuchira kuongororwa kwakanaka kubva pakaburitswa chitsauko chekutanga muna 1999., Mavambo akaipa, uye yave ichifarirwa zvikuru nevaverengi vemazera ese. Nechikonzero ichi, yakafuridzira firimu reNickelodeon rine zita rimwe chete (2004) (nyeredzi Jim Carrey muchinzvimbo chaCount Olaf) uye neNetflix nhepfenyuro (2017-2019).
2 Nyika yakaudzwa naLemony Snicket
3.1 Rimi rakaipa
3.2 Kuchenjera sechombo chekupona
3.3 Mudzvanyiriri kwazvo
3.4 Nhema nhema pamusoro
3.5 Nharo yakadzama
4.1 Lemony kudhiraivha
4.6 Verenga Olaf
Daniel Handler munyori webhuku akazvarwa muSan Francisco, California, United States, muna Kukadzi 28, 1970. Akamira zvakare semuimbi, achiridza akodhiyoni uye akanyorera mapoka akasiyana, senge bhendi reMagnetic Fields, semuenzaniso. Akashandawo mukuvandudza zvinyorwa zvemafirimu akasiyana siyana eHollywood uye makambani akazvimirira ekugadzira.
Saga rake remabhuku Nhevedzano yenjodzi dzakashata yatengesa anopfuura mamirioni makumi matanhatu emakopi pasi rese uye yakadudzirwa mumitauro inodarika makumi mana. Uye zvakare, Handler akaburitsa zvimwe zvinyorwa zvine chekuita nemunyori-hunhu-murondedzeri, Lemony Snicket: Iyo isingabvumirwe biography uye Yese mibvunzo isiriyo.
Nyika yakaudzwa naLemony Snicket
Mune mafirimu, zvakasikwa zvakagadzirwa naDaniel Handler zvakafananidzwa neizvo zvakagadzirwa naTim Burton kusvika Eduardo scissorhands. Nekudaro, iyo nyika yakataurwa naLemony Snicket ine epakutanga maficha, pamwe nemamiriro ezvinhu asina musoro uye akawedzeredza.
Nharaunda ye Nhevedzano yenjodzi dzakashata inogona kurondedzerwa se "suburban gothic". Kunyangwe imba yemhuri yeBaudelaire iri muguta reBoston, Massachusetts, nzvimbo chaidzo hadziwanzo kutaurwa mumabhuku. Nekudaro, mamwe mareferenzi akavimbika anoonekwa; semuenzaniso, zita remavara "Trout, muFrance", rinotsanangurwa muchitsauko chechitanhatu (Elevator Ersatz kana "An maikisi erevheta") mukati mechitoro chemabhuku chinonzi Jerome naEsmé Squalor.
Saizvozvowo, kune nzvimbo chaidzo dzekuNorth America dzakasanganiswa nemanyepo ekuremekedza mazita. Pakati pezvinhu zvakasarudzika pane "Iyo Duchy yeWinnipeg" uye "Mambo weArizona." Chimwe chinhu chinonzwisisika izwi rekuti "VFD", iro - sekumwe kuongorora - rinoreva kufungidzira kunoverengeka Slapstick naKurt Vonnegut, yakanangana nebumbiro remutemo we "mhuri yekuumba" semushonga wekusurukirwa.
Izvi zvakakosha nekuti kutanga kwe iyo saga inoratidza dambudziko rakakomberedza nherera nhatu (hama dzeBaudelaire) uye nerima Count Olaf, anova muchengeti wevadiki zviri pamutemo. Nyaya yacho yakakamurwa muzvitsauko gumi nezvitatu zvinotevera (mamwe mazita akasiyana neshanduro yavo yechirungu chaiyo):
Imba yemhuka dzinokambaira.
Iyo yakasviba yekucheka matanda.
Austere kwazvo academy.
Chipatara chine hasha.
Iyo yekudyira carnival.
Nhevedzano yenjodzi dzakashata inorondedzera zvakaitika zvinokanganisa zveVioleta, Klaus naSunny Baudelaire. Mushure mekufa kwevabereki vavo mumoto, vakomana vanosiiwa vari mumaoko ehama - vanofungidzirwa kuti ndivo honzeri yemoto wemhondi - Count Olaf.
Pakutanga kwekutanga, inoratidza maitiro emurairidzi anotyisa anoedza kuba nhaka hombe kubva kuhama dzeBaudelaire. Zvino, nerubatsiro rwevaano fambidzana navo, anoenda kunogadzira njodzi dzisingafungidzirwe kuitira kutevedzera tsaona inouraya yevana.
Mufananidzo kubva muiyo firimu vhezheni yeA Series of Calamitous Misfortunes.
Kuchenjera sechombo chekupona
Sezvo zviitiko zvinowonekera, ivo vasingabatsiri protagonists vanofanira kugadzirisa zvakaomarara zvakavanzika. zvine chekuita nekupona kwavo. Pamusoro pezvo, netiweki yezano rakadzika rakabatana nemhuri yake uye nesangano repachivande rinozivikanwa seVFD, rakabatana naCount Olaf, vabereki vake nedzimwe hama dzepedyo.
Iwo akateedzana anorondedzerwa naLemony Snicket, uyo anoisa ese ega ega emabasa ake kurudo rwake rwekupedzisira, Beatriz. Kubva pakutanga muverengi anokurudzirwa kuti arege kuenderera mberi nekuti "inyaya yakaipa kwazvo." Asi chinangwa chemunyori ndechekuwedzera kuda kuziva kuburikidza nemhedzisiro.
Kuverenga kunova kunonakidza kwazvo sekunge eccentricities yaCount Olaf ichioneka, uye hama dzaBaudelaire dzinoratidza huchenjeri hwavo hukuru mukugadzirisa chimwe nechimwe chinetso chakakosha kuti chikunde pakati penzvimbo dzakasuruvara, dzizere nemateki nemidziyo inogona kuuraya.
Nhema nhema pamusoro
Munzira yekurondedzera zviitiko, hunhu hwekusviba uye kutsvinya zvinowanzoitika. Zvakare nezve anachronistic zvinhu zvinoreva zvetsika uye zvinyorwa zvekufungidzira zvinoonekwa zvechiGothic chimiro. Nechikonzero ichi, akateedzana enjodzi dzakaipisisa dzakarongedzwa sesaga yezvinyorwa zvemazuva ekupedzisira zvekunyora kwekufungidzira.
Iko kushanduka kwe iyi nharo inotsvaga (mazano pa) maitiro epfungwa ekuchinja kubva pahuipi uye husina mhosva hudiki kune hunhu hwakaoma hwekukura. Nekudaro, iyo nzira yezvinhu zvakaoma kunzwisisa zvehunhu uye kusanzwisisika kwepfungwa, zvinoratidza kuti zvimwe zvezviito zvinoitwa nehama dzeBaudelaire zvakaoma kunzwisisa.
Muverengi anonyengedzerwa kuti agare achifungisisa nezvehutsanana hwevanhu vese varipo musaga. Mukupedzisira, murondedzeri anotsvaga kubatanidza vanogamuchira nemaonero ake enyaya, anozvizivisa serutivi rwakanaka rwenyaya.
Munyori Daniel Handler.
Ndiye murondedzeri wenyaya yese (anotaura muchimiro chekare) «nezvechakavanzika chinokatyamadza uye chinovhiringidza chakaitika«. Ndiye zvakare mutikitivha ari kutsvaga chokwadi chakakomberedza hama dzeBaudelaire. Pamusoro pezvo, pakati penyaya zvinoratidzwa kuti iye amene akatambura tsaona inosiririsa munguva yake yakapfuura.
Iye ndiye mubatsiri uye mubatsiri wezvemari kumhuri yeBaudelaire. Mushure mekufa kwevabereki, iwe unosara uine mutoro wekusarudza akanaka muchengeti wepamutemo kune vadiki. Asi hunhu hwake hwekumurasa hunomutungamira kuti atore chisarudzo chisina kuomarara kwaari ... Verenga Olaf.
Ndiye hanzvadzi inoshamisa ine hunyanzvi. Kugona kwake kusingaperi kugona kunomubvumidza kuunganidza chero muchina, chishandiso kana chishandiso kubva kuzvinhu zvinomubata.
Iye ndiye "wepakati hama," anoshingaira muverengi nenjere yepamusoro kwazvo. Kutenda kuvoracity yake yeruzivo, anokwanisa kuwana mhinduro yakakodzera kune zvakavanzika zvakawanda izvo maBaudelaires anofanira kusangana nazvo.
Iye akanaka kwazvo "anoruma mwana". Anoda kunyudza mazino ake mune chero chinhu, icho chakanyanya kusimba chiri nani. Iko hakuna chinhu chisingakwanise kutyora nesimba remeno ako.
Iye anongozvifunga, anorwara, anotonhora, anoverenga, anonyengera uye ane hutsinye hunhu. Iye anofunga iye nyeredzi semuimbi uye mutambi, asi iye chaizvo lousy. Nekudaro, iwe unogara uchishaya mari yekuita ako mapurojekiti. Nekudaro, haazeze kutendeukira kupfuma yenherera dzeBaudelaire senzira yekuvaka imba yemitambo nekuwedzera mukurumbira wekambani yake.
Quote naDaniel Handler - Frasesgo.com.
Verenga maitiro aOlaf ekushora uye histrionic maitiro anogona kuvhiringidza vaverengiPasina kutaura mutauro wakaomarara uye wakasarudzika unoshandiswa neve protagonists. Nechikonzero ichi, zvakakosha kuti urambe uchiteerera kutemu yega yega uye pun inoonekwa muchikamu (pane imwe nguva pfungwa dzese dzakanyatsotsanangurwa)
Muchidimbu, Nhevedzano yenjodzi dzakashata ine zvese zvakasarudzika zvinhu zvebasa riine yakakwira tsika mupiro. Iye munyori, Daniel Handler, anoratidza ake akasiyana siyana ezvinyorwa zvinyorwa zvakagadzirwa mune yechokwadi rondedzero maitiro ayo anoratidzira hunhu hwakadai sekuvimbika, kugona kwehungwaru uye kugona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Nhevedzano yenjodzi dzakashata